Izotope RX: Etu esi ewepu Noise na Voice gi | Martech Zone
Onweghi ihe na-akawanye njọ karịa ịlaghachi ụlọ site na ihe omume, itinye ekweisi ụlọ ọrụ gị, yana ịchọpụta na enwere ụda ụda na ndekọ gị. Nke ahụ bụ nnọọ ihe mere m. Emere m ọtụtụ usoro ndekọ Podcast na ihe omume ma họrọ maka igwe okwu lavalier na onye na-eme ihe ndekọ Zoom H6.
Anyị enweghị oghere ụlọ ọrụ raara onwe ya nye ka ịdekọ, anyị na-anọdụ ala na tebụl dị anya site na igwe mmadụ… mana ọ nyeghị aka ma ọlị. A sị na m nwere igwekota m na igwe okwu igwe okwu ụfọdụ, agara m ege ntị n'ọtụtụ ihe dị na okirikiri mana ndị na-egwu egwu a na-ewere obere ụda ọ bụla! Obi gbawara m.
Yabụ, anyị ji ngwaọrụ Audacity mee nnwale ụfọdụ maka iwepụ ụda ndabere mana ọ bụrụ na anyị emezie ntọala ahụ, olu ahụ malitere ịda ụda. Edere m okwu a na ọkacha mmasị m Podcast na enyi m dị ịtụnanya, Jen Edds ozugbo tụrụ aro Izotope RX6, ngwá ọrụ naanị onwe ya maka ịrụzi faịlụ ọdịyo.
Enweghị ọzụzụ ọ bụla ma ọ bụ ọbụna na-ekiri vidiyo Youtube, ebuputere m egwu egwu m dị egwu na ngwa ọrụ, pịa Voice De-mkpọtụ, na ọ fọrọ nke nta ka m tinye uwe ogologo ọkpa m ka m na-ege mkpọtụ azụ na-apụ n'anya!
Ọ bụrụ n ’ọ bụrụ na ị na-eche na m na-eme nke a… M gara n’ihu ma kerịta otu ụzọ ọpụpụ nsonaazụ ahụ. Kpamkpam na-eju anya! Akụkụ akụkụ - Agaghị m akọ ihe a na studio m, naanị m na-eji igwe desktọọpụ na Garageband… ya mere ekpela m ikpe.
A na-ere Izotope RX6 Voice De-ድምፅ ugbu a maka $ 99 site na $ 129. Nke a bụ ihe achọrọ maka pọdkastị ọ bụla hụrụ onwe ha na-agba mgba na mkpọtụ ụda na ndekọ ha - site na clicks, hums, clipping, na ndị ọzọ. Naanị m jiri ọnọdụ mgbanwe na nrụpụta, mana ị nwere ike ịrụ ọrụ na faịlụ ọdịyo gị dị ka a ga - asị na ọ dị na Photoshop na ọtụtụ wuru na ngwaọrụ.
Zụta Izotope RX6 Voice De-noise
Tags: mkpọtụ azụde-mkpọtụizotopeizotope rxizotope rx6wepụ mkpọtụ azụwepụ mkpọtụ